Stabledị nke mbụ nke Trident OS dabere na Void Linux dị njikere | Site na Linux
N’ọnwa Ọktọba nke afọ gara aga anyị na-ekekọrịta ebe a na blog akụkọ nke mkpebi site n'aka ndị mmepe OS Trident ka ha si BSD gaa Linux N'ihi na site n'echiche ya enwere ụfọdụ nkwekọrịta nke ngwaike, nkwado, na mgbakwunye na enweghị ike iwepu ụfọdụ nsogbu na-egbochi ndị ọrụ nke nkesa, nkwado maka ụkpụrụ nkwukọrịta nke oge a na nnweta ngwugwu.
Mgbe e mesịrị na mmalite nke afọ, anyị na-eso akụkọ banyere ntọhapụ nke beta ụdị nke Trident OS na Linux Kernel, nke ndị mmepe Trident si na BSD gaa Linux dabere na nkesa Void Linux.
Ugbu a otu ọnwa gachara site na mmalite nke ụdị beta Ndị mmepe Trident wepụtara ozi banyere ntọhapụ nke mbipụta anụ nke Triden 20.02 nke emere oru ikpeazu nke mbufe nke FreeBSD na TrueOS rue isi ngwugwu Void Linux.
Ma beta ma nke kwụsiri ike iji ZFS na nkewa mgbọrọgwụ na ikike iji weghachite gburugburu buut site na iji ZFS snapshots.
Maka onye ọrụ ọ bụla, e mepụtara dataset dị iche iche maka ndekọ ụlọ (ị nwere ike ịgbanwe snapshots nke ndekọ ụlọ na-enweghị inweta ikike mgbọrọgwụ), a na-enye nzuzo data na ndekọ aha onye ọrụ.
E wezụga nke ahụ ọ nwere ike ịrụ ọrụ na sistemụ na EFI na BIOS. Swap nkebi nke nzuzo na-akwado ma na-akwado nkwado ngwugwu maka ma glibc na musl system library (ị nwere ike iji glibc ma ọ bụ musl ịhọrọ site na).
Onye nrụnye na-enye ọkwa anọ nke nrụnye, Nke ahụ dị iche na usoro nchịkọta:
Cha cha: a nkiti set nke Void nchịkọta tinyere ngwungwu maka ZFS ndakọrịta.
Sava: nchịkọta iji rụọ ọrụ na ọnọdụ njikwa na ọrụ ndị ọzọ maka sava (firewall, cron, autofs, wireguard, wdg).
Desktọpụ Lite: desktọọpụ pere mpe dabere na desktọọpụ Lumina.
Desktọpụ zuru ezu: desktọọpụ zuru ezu nke Lumina nwere ọfịs ndị ọzọ, nkwukọrịta na ngwa multimedia.
Site na ịkwaga na Void Linux, Trident na-ezube ịgbasa nkwado maka kaadị eserese ma nye ndi oru ndi ozo ndi ozo ugbua, yana ịkwalite nkwado maka kaadị ụda, nnyefe nke ọdịyo, gbakwunye nkwado maka ọdịyo site na HDMI, melite nkwado maka ihe nkwụnye ntanetị na ntanetị na ngwaọrụ Bluetooth, na-enye nsụgharị mmemme ọhụrụ, na-agba ọsọ usoro buut, ma mejuputa nkwado maka nrụnye ngwakọ na sistemụ UEFI.
Nhọrọ nke Void Linux dị ka usoro sistemụ bụ n'ihi na distro na-agbaso ihe nlereanya nke usoro na-aga n'ihu iji melite nsụgharị ngwanrọ (mmelite ndị na-eso ya, enweghị ụdị nkesa dị iche).
Ihe oru ngo a na-eji onye njikwa sistemụ ọsọ iji bido ma jikwaa ọrụ, jiri njikwa ngwungwu nke xbps ya na sistemụ ngwugwu xbps-src. Kama Glibc, a na-eji Musl dịka ọba akwụkwọ ọkọlọtọ na LibreSSL karịa OpenSSL.
1 Budata Trident 20.02
1.1 Nweta nkwalite site na beta ka ọ kwụsie ike
Budata Trident 20.02
Maka ndị nwere mmasị ịnwale ọrụ ndị mmepe Trident mere na ịkwaga sistemụ ha na Linux, Nwere ike ibudata anụ version mbiet ya ukara website.
Iji chekwaa ihe oyiyi ahụ, ị ​​nwere ike ime ya na Etcher nke bụ ngwaọrụ multiplatform.
Nweta nkwalite site na beta ka ọ kwụsie ike
Ugbu a maka ndị na - ebudata ụdị beta ha we biri nime ya, ha nwere ike imelite ka nsụgharị anụ ahụ na-enweghị ịtinyegharị sistemụ ahụ.
Maka nke a ha kwesiri ime ka nchekwa ebe oru ngo Trident na iwu na-esonụ:
Ha gha aghazie ikikere ya na:
Mekọrịta ebe nchekwa ihe na:
A ga-ajụ ha ma ha chọrọ ịnabata / chekwaa igodo ọha na eze maka ebe nchekwa Project Trident. Pịnye "y" wee pịa tinye iji chekwaa igodo ahụ.
Mere nke a ugbu a anyị ga-eme mmelite ahụ site na iji kọmputa ede otu n'ime iwu ndị a:
Kedu nke ga-etinye usoro ntọala ma nke a bụ nhọrọ a tụrụ aro maka ndị ọrụ nwere ahụmahụ ma ọ bụ ndị na-ahọrọ iwu sistemụ na mmasị ha.
Ọ bụ ezie na ndị na-ahọrọ ịghara ịme ka ihe sie ike, ha nwere ike iwunye usoro zuru oke na iwu na-esonụ:
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkesa » Depụta ụdị nkwụsi ike izizi nke Trident OS dabere na Void Linux
Kedu ihe ọ na-atụnye ma e jiri ya tụnyere nsụgharị ọrụ nke VOID? N'ihi na ihe ọ bụla Lumina ...